कम छैनन् उद्धार र राहतमा खटिनेका पीडा ! - Enepalese.com
कम छैनन् उद्धार र राहतमा खटिनेका पीडा !
इनेप्लिज २०७२ वैशाख २७ गते १३:०६ मा प्रकाशित
ललितपुर, २७ वैशाख । यही वैशाख १२ गतेको भूकम्पले ल्याएको विपत्लाई मध्यनजर राख्दै सबै सुरक्षा निकाय तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारी पीडितको उद्धार तथा राहतका लागि अहोरात्र खटिरहेका छन्, तर उनीहरुको पीडा सुन्ने कोही छैनन् ।
विपत् व्यवस्थानमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवम् निजामती कर्मचारीले आफ्नै पीडालाई लुकाएर भए पनि विपत्का बेला एकभई सहयोग गरिरहेका छन् ।
सन्त नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई आश्रम सुरक्षाका लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरी जवान भोला तामाङको एउटै प्रण छ, राष्ट्रमा विपत् आएको बेला कटिबद्ध भई सहयोग गर्ने । भूकम्पपीडित बनेकाहरुको उद्धार र सहयोग गर्ने जवान तामाङको प्रण हो यो ।
बिडम्वना सशस्त्रका जवान तामाङले यसो भनिरहँदा घरको चिन्ताले उनको मुहारमा भने चिन्ताका रेसाहरु प्रस्टै देखिन्थे । सिन्धुपाल्चोक हैवुङ–३ का तामाङ आफ्ना दुई घर पूर्णरुपमा ध्वस्त हुँदाको पीडालाई सहेर पनि आफ्नो दायित्वलाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरिरहेका छन् । तामाङको छ जनाको परिवार पालमुनिको पीडा भोगिरहेको छ ।
“परिवारका सदस्यहरुले के खाएका छन्, के लगाएका छन् केही थाहा छैन”– उनले भने । राहतको नाममा अहिलेसम्म एक थान पाल, दुई पाथी चामल र आधा लिटर खाने तेलबाहेक उनको परिवारले अरु केही पाएको छैन ।
भूकम्पले गाउँलाई नै ध्वस्त बनाएको पत्रपत्रिका एवम् टेलिभिजनमा देखिन्छ, तर आफूले प्रत्यक्ष रुपमा देख्न नपाएको उनको पीडा ज्यूँकात्यूँ नै छ । “के गर्नु, बिदा पाए एक पटक घर गएर सबै वस्तुस्थिति बुझ्न पाउँथे”–उनले दुखेसो गरे ।
यस्तै, ओखलढुङ्गा नर्मदेश्वर गाविस–५ का सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार टोपबहादुर श्रेष्ठको कथा पनि कम दर्दनाक छैन । “राष्ट्रलाई आवश्यक परेका समयमा दिलोज्यान दिएर सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, तैपनि घरको याद आउनु त स्वभाविकनै हो”–उनले भने, “भूकम्पले घरलाई ध्वस्त बनाएको छ, तर हेर्न जान पाएको छैन ।”
परिवारले राहतका नाममा बस्नका लागि एक थान पाल, दुई पुरिया बिस्कुट र एक प्याकेट चाउचाउभन्दा अरु नपाएको उनले गुनासो गरे । “राज्यका तर्फबाट दिइने सहयोग त आउला, तर अहिले बस्नका लागि बाँसको कटेरो मात्र पनि बनाउन घर जान पाए हुन्थ्यो”, उनी भन्छन् ।
भूकम्पले घर ध्वस्त भएपछि परिवारका सदस्य पालमुनि दिनरात बिताउन बाध्य भएको खबरले आफूलाई मर्माहत गराएको सशस्त्र प्रहरी हवल्दार श्रेष्ठले गुनासो गरे ।
नुवाकोट कल्याणपुर गाविस–६ का भीमसेन कार्कीको पनि जीवन भोगाइ उस्तै छ । ललितपुरको दक्षिणी भेगमा पर्ने भट्टेडाँडा प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक कार्कीले भूकम्पका कारण ध्वस्त भएको घरमा उद्धार कार्यमा खटिएको तर आफ्नो घर पुग्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । “भूकम्पले घर ध्वस्त भएको छ, तर के गर्ने पहिलो कुरा त राष्ट्रलाई विपत् परेको बेला कसरी बिदा माग्ने”– उनले दुखेसो पोखे ।
यस्तै, रसुवा लहरेपौवा गाविस–९ का सशस्त्र प्रहरी जवान राकेशकुमार घिमिरेले पनि आफ्नो दुःख यसरी पोख्नुभयो, “आफ्नो लहरेपौवा गाउँमा रहेका ३५ घर ध्वस्त भएको सुनेपनि प्रत्यक्ष रुपमा आफूले देख्न पाएको छुइन ।”